Chikunguru 27, 2018 arun
Nasdaq inoshanyirwa up musuo musangano kubatsira vadzvinyirire crypto
Nasdaq Inc. ndehwokuti kubatsira vadzvinyirire cryptocurrency indasitiri & vaipinda musangano rakavharwa-musuo yapfuura svondo rino muna Chicago, pamwe nevamiriri nemakambani inenge hafu dhazeni, kusanganisira tsika exchanges uyewo Gemini nemamwe mumisika crypto, maererano munhu aiziva chiitiko. Pfungwa Kuunganidzwa, munhu uyu akati, kwaiva kukurudzira indasitiri kuita zvinhu zvichavandudza mufananidzo chacho zvinogona basa kumisika yose hunotsigira.
Mutauriri Nasdaq akasimbisa chiitiko kwakaitika. Pakati misoro dzinokurukurwa vaiva zvinorehwa ramangwana murau cryptocurrencies, chii anodiwa zvishandiso uye chii zvokuongorora hunozodiwa. Nasdaq akataura svondo rino kuti zviri achivapa yepamusoro 5 crypto exchanges, kusanganisira Gemini uye SBI Virtual dzeEurope. Pane inotarisirwa kuva kuramba nhaurirano pakati vechikamu. Nokuda kwayo munhoroondo illiquidity, kuba, nechitsotsi kushaya muchitokisi mabasa, Wall Street kwave anononoka kutamira kupinda nzvimbo.
Tech Zirume Hitachi nezvechinhu blockchain anotsanangura fingapurindi mubhadharo hurongwa
Tokyo anotsanangura Tech hofori Hitachi uye Telecom opareta KDDI vari kuedza munhu biometric, blockchain-based system kugadzirisa chitoro kubhadhara. Achishandisa Hitachi kuti blockchain yakavakwa pamusoro Hyperledger Fabric papuratifomu, ari biometric ongororo gadziriro akagadzirirwa nokusangana KDDI kuti kopani maitiro, kubvumira vatengi vane Coupons hunotsigira kuti mu-chitoro kutenga vachishandisa zveminwe yavo chete.
pakutanga, kopani riri kugarwa hurongwa chichange trialed pana KDDI chitoro muzvitoro yaiva Tokyo uye zvokudya nehoro of Mr. doughnut cheni. Maererano Hitachi, vatengi vaishandisa kuvanyora ruzivo rwavo biometric uyewo kopani Tera pavanenge kunyoresa kushandisa hurongwa. date ichi vachabva encrypted asati twakachengetwa pamusoro blockchain.
Bank of Canada tsvakurudzo bepa inoti Central Bank crypto kwaigona zvoupfumi pfuma
Central Bank-rakapa cryptocurrency anogona vanokwanisa kuunza upfumi kugarika Zvakawanwa nokuda Canada uye US, maererano nechepakati kubhengi mutsvakurudzi. Mune quantitative inobva tsvakurudzo bepa akabudiswa China, ari Bank of Canada S. Mohammad R. Davoodalhosseini inoti nemagariro anowana kudzidzisa Central Bank Digital Currency (CBDC) zvinofungidzirwa sezvo kusvika 0.64% nokuti Canada & kusvika pa 1.6% nokuti US, zvichienzaniswa avo upfumi kana chete mari inoshandiswa.
Kwakavakirwa hwakadzama Modelling uye masvomhu, nevatsvakurudzi Anoti mupepa kuti nyika zvoupfumi kugarika - kweinenge Canada uye US - kungava nani kuburikidza dzinomiririra mari ine CBDC, inopiwa Implementation haisi chaizvo kudhura.
Kraken Daily Market Mushumo 26.07.2018
$96.5M nhumbi mhiri misika zvose nhasi
Previous Post:Blockchain News 26.07.2018
Next Post:Blockchain News 30.07.2018